नेपालमा निजीकरणको औचित्य - Karobar National Economic Daily
नेपालमा निजीकरणको औचित्य
query_builderJuly 25, 2017 12:02 AM supervisor_accountडा. सुमनकुमार रेग्मी visibility2468
सन् १९७० पछि विश्वमा आर्थिक शिथिलता, मुद्रास्फीति भुक्तानी सन्तुलन, गरिबी र बेरोजगारीमा वृद्धि भयो । फलतः यसले खुला अर्थतन्त्र र उदार अर्थव्यवस्थाकै महत्व बढायो । त्यो बेला बेलायतमा राष्ट्रियकरण गरिएका सम्पत्ति पुनः धमाधम निजीकरण गर्न थाालियो ।
बेलायतमा सन् १९७९ पछि बनेको सरकारले १० वर्षको अवधिमा १९ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरेको थियो । आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको यो विश्वव्यापी लहरबाट विकासोन्मुख देश नेपाल पनि अलग रहन सकेन । वि.सं. २०४० देखि नै नेपालमा खुला अर्थतन्त्रको अवधारणा सुरु भए पनि ०४८÷४९ देखि भने आर्थिक उदारीकरणको नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रयास थालनी भएको हो ।
तत्पश्चात् केही वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक सुधार पनि भयो । निजीकरणलाई आर्थिक उदारीकरणको पाटो मानिन्छ, किनकि यसले अर्थव्यवस्थालाई प्रतिस्पधी बनाउन सहयोग गर्छ । खुला अर्थतन्त्र व्यवस्थाको प्रावधान भनेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा वृद्धि हुनु हो । यस्तो कार्य निजीकरणबाट गर्न सघाउ पुग्दछ ।
नेपालमा सन् १९८०–८५ मा चण्डेश्वरी टेक्सटाइल र चिउरी घिउ उद्योग नामक दुई संस्थानबाट निजीकरण सुरु भएको हो । तर, यो निजीकरण अभियानमा पर्याप्त गृहकार्य हुन सकेन, अर्थात् वैज्ञानिक मोडालिटी तयार हुन सकेन ।
त्यसैले निजीकरणबाट पर्ने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन असरका बारेमा अध्ययन राम्ररी नहुँदा निजीकरण गर्न बाँकी ३७ र निजीकरण गरिएका ३० वटा संस्था हालको अवस्थामा पुगेका हुन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई निजी क्षेत्रमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नु वा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु नै निजीकरण हो ।
वि.सं. २०५० मा निजीकरण ऐन ल्याई नेपालमा निजीकरण सुरु गरिएको थियो । यस ऐनअनुसार निजीकरण भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, बिक्री गर्र्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजी क्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी–कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने÷गराउने कार्य हो ।
संस्थानहरूको संख्या वि.सं. २०१७ सालमा आठवटा थियो भने २०४९ सालमा ६९ वटा पुगेको थियो, तर निजीकरण अभियानपछि भने संस्थानको संख्या ३६–३७ मा सीमित भएको छ । निजीकरणपछि नाफामा सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूमा नेपाल बिटुमिन ब्यारेल कम्पनी, नेपाल ल्युब आयल कम्पनी, नेपाल ढलौट उद्योग उद्योग लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेड, भक्तपुर इँटा कारखाना लिमिटेड छन् ।
तर, निजीकरणपछि पनि नोक्सानमा चलेका उद्योगहरूमा नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन र नेपाल चिया विकास निगम छन् । निजीकरणपछि बन्द भएका उद्योगहरूमा भृकुटी पल्प एन्ड प्रतिष्ठान मिल्स, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बालाजु कपडा उद्योग, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, हेटौडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेड, कृषि औंजार कारखाना लिमिटेड, विराटनगर जुट मिल्स र हिमाल सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड छन् ।
नेपाल कोल लिमिटेडको अवस्था भने स्पष्ट छैन । बन्द नभएको तर सञ्चालनमा नरहेकोमा रघुपति जुट मिल, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार र नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी रहेका छन् ।
निजीकरणपछि अस्तित्वमै नरहेका संस्थानहरूमा नेपाल यातायात संस्थान, सुर्ती विकास कम्पनी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री कम्पनी र नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी हुन् । त्यस्तै कृषि चुन उद्योग लिमिटेड भने खारेजीमा गएको छ ।
यसरी हेर्दा नेपलाको निजीकरण त्यति सफल मान्न सकिन्न । यसो हुनुमा धेरै समस्या रहेका देखिन्छन् । निजीकरण समिति र निजीकरण निकाय प्रभावकारी नहुनु, सरोकारवालाबीच नीतिगत सामञ्जस्य हुन नसक्नु, जटिल र लामो विघटन प्रक्रिया आदि प्रमुख कारण हुन् ।
त्यस्तै जग्गा अतिक्रमणको विषयमा विवाद देखिनु, निजीकृत निकायको सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा समस्या, समायोजन हिसाब मिलान दुरुस्त हुन नसक्नु, न्यायिक निकायमा निजीकृत निकायको विवादित विषय र अनुगमन तथा मूल्य प्रणाली प्रभावकारी नहुनु आदि समस्या प्रमुख रूपमा रहेको सरकारी अभिलेखमा पाइन्छ ।
सन् १९९० दशकमा निजीकरणलाई अघि बढाइयो तर त्यसलगत्तै देशमा सशस्त्र आन्दोलन सुुरु भयो । भृकुटी कागज कारखानामा एकै समयमा आठवटा मजदुर युनियन भएका कारण थेग्न नसकेर कारखाना बन्द भएको देखिन्छ ।
त्यसबेला अधिकांश उद्योगमा यस्तै अवस्था थियो । त्यसबेला जीडीपीमा १५ प्रतिशत रहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशतमा झरी ०७३/७४ आउँदा ५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । त्यतिबेला निजी र अन्य सरकारी उद्योग पनि बन्द भए थिए । निजीकरण बेलायतमा राम्रो तर नेपालमा असफल हुनुमा राजनीतिक र व्यावसायिक वातावरण कारण मानिन्छ ।
निजीकरण गरिएका निकायहरूका अवस्था कमजोर तथा वासलात ठीक नहुनुमा सरकार र व्यवसायीले एक–अर्कालाई दोष देखाउँछन् । व्यवसायीले भने सरकारले आवश्यक मद्दत नगर्दा निजीकरण गरिएका संस्थानको अवस्था खराब हुन पुगेको दाबी गर्छन् ।
निजीकरण गरिएका ३० मध्ये २४ को अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । संस्थानहरूमा मनलाग्दो तरिकाले कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य हुँदै आएकाले संस्थाहरू थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । दक्ष कर्मचारी तथा विषय विशेषज्ञहरू राखेर काम गर्ने हो भने एउटै कार्यप्रकृतिका संस्थानहरूलाई एकआपसमा मर्जर गरेर वा छाता संगठन बनाएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमा कार्यसञ्चालन गर्न २७ हजार ८ सय ६२ कर्मचारी कार्यरत रहेको देखिन्छ । हरेक वर्ष यस्ता कर्मचारीहरू आसेपासे रूपमा बढ्दै जाने गरेका छन् । तर, हाम्रा मान्छेभन्दा राम्रा मान्छेको छनोट सधैं भएमा कुनै पनि संस्थान घाटामा जान नसक्ने दाबी गर्न सकिन्छ ।
सरकारी संस्थाको सेवा र उत्पादनलाई जनताले अपार विश्वास र माया गरेका छन् तर पनि संस्थानहरू घाटामा जानु व्यवस्थापकीय कमजोरी नै हो । ३६ वटा संस्थानमा सरकारले ८२ अर्ब ७५ करोड सेयर र ८४ अर्ब ९१ करोड ऋण लगानी गरेको देखिन्छ ।
तर, लगानीको अनुपातमा प्रचलित ब्याजदरभन्दा पनि न्यून लाभांश प्राप्त हुनेछ । त्यसैले यस्ता संस्थाहरूलाई सेताहात्तीका रूपमा टिप्पणी गर्ने गरिएको छ । त्यसैले यस्ता संस्थाहरूलाई नाफामूलक बनाउने भने एकातिर सरकारी हस्तक्षेप कम गर्नुपर्छ भने अर्कातिर तिनलाई समयसापेक्ष रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । सर्वप्रथम यी संस्थाको प्रमुख नियुक्ति गर्दा विशेष ध्यान दिइनु उपयुक्त हुन्छ ।
संस्थाप्रमुख छनोट गर्दा कि त खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्छ कि त संस्थानको उद्देश्यका विषयमा विशेष ज्ञान हासिल गरेका विशिष्ट विज्ञहरूलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । यसरी संस्थान प्रमुखको छनौट भएमा संस्थानको उद्देश्य पूरा हुन्छ ।
नेपालका हरेकजसो सरकारले संस्थानको सुधारसम्बन्धमा अध्ययन गरेका छन् । ती अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावहरूलाई कम्प्युटरमा थन्क्याउँदै आएको देखिन्छ । सुधारका प्रयत्न संस्थागत रूपमा नहँुदा संस्थानहरूको दायित्व राष्ट्रले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो धरातलमा सरकारले कसरी ३७ वटा सेता हात्तीका भार कम गर्ने हो, त्यतातिर विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
निजीकरण सुरु भएको दशकौं बित्दा पनि निजीकरणबाट प्राप्त प्रतिफललाई राम्ररी उपयोग गर्न नसक्नु तथा त्यसमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न नसक्नु सरकारी नीतिको असफलता नै हो भन्न सकिन्छ ।
निजीकरणबाट अन्य देशले फाइदा लिन सकेका छन् भने नेपालले निजीकरणबाट फाइदा लिन नसक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले निजीकरणबारे सही विश्लेषण गरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई उपयुक्त दिशातर्फ डो¥याउनु आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्र मुद्रास्फीति सार्वजनिक संस्थान